Ivory Coast: Shirweynaha 5aad ee Afrika & Midowga Yurub oo ka socda Abidjan – Kasmo Newspaper
Ivory Coast: Shirweynaha 5aad ee Afrika & Midowga Yurub oo ka socda Abidjan
Updated - November 29, 2017 3:33 pm GMT
London (Kasmo), Khamiista berri ah, 30ka Nofember 2017, waxaa la soo gabagabayn doonaa Shirweynaha 5aad ee Midowga Afrika & Midowga Yurub uga socda caasimadda Ivory Coast ee Abidjan.
Ajendaha kulanka oo furmay maanta oo Arbaca ah, 29ka Nofember 2017, waxaa ugu horreeya Dhallinyarada Afrika oo loo haysto in ay la mid yihiin khayraad dabiici ah oo muhiim u ah horumarinta Qaaradda.
Kulankan 5aad waxaa horey isugu waafaqay Madaxweynayaasha Afrika iyo Yurub, bishii July 2016kii, in tii uu socday Shirweynihii 27aad ee Midowga Afrika ee ka dhacay Kigali, Caasimadda Rwanda.
War-murtiyeedka “EU External Action” oo Shirweynaha laga akhriyay ayaa u qornaa in kulammadu ku soo beegmeen xilli xiriirka Yurub iyo Afrika uu marayo marxalad xasaasi ah; sida taxadiyada dhanka nabadgalyada oo mar kasta sii adkaanaya, muhaajiriinta, argagixisada, iyo kobaca dhaqaalaha.
Midowga Yurub waxay la tahay in dhibaatooyinkaas caamka ah looga gudbi karo oo qur ah is-kaashi dhow, istrarteeji ah oo xoog leh oo ay hoggaaminayaan Hiigsiga 2063ka Afrika ee SDGs (Sustainable Development Goals) iyo midka EU , Global Strategy.
Wakiilka Sare ee Siyasadda Arrimaha Dibadda Midowga Yurub, Federica Mogherini, oo Shirka joogta ayaa caddeysay in kulammadu gacan ka gaysteen sidii loo curin lahaa aragti midaysan. Wakhtigaan xaadirka ah, EU iyo dalalka xubnaha ka ah waa deeq-bixiyaha ugu weyn Afrika oo sannad kasta bixiya 20 Bilyuun oo Euro.
Qorshaha cusub ee “External Investment Plan” wuxuu qorayaa in mas’uuliinta Yurub u qoondeeyaan 44 Bilyuun oo kale, oo la sii marsiinayo maalgashiga gaarka ah, sannadka 2020 gudihiisa.
Sanduuqa “EU Emergency Trust Fund” ee Afrika wuxuu diyaariyay 3,2 Bilyuun oo Euro oo loo isticmaalay hirgalinta 117 barnaamij oo kala gedisan oo shaqo-abuur ah, si loo kobciyo dhaqaalaha, loona maareeyo muhaajirnimada.
Si haddaba loo gaaro yoolka la doonayo, Midowga Yurub oo kaashanaya Hay’adaha Qarammada Midoobay, sida UNHCR, wuxuu 12ka bilood ee soo socda ka caawin doonaa 15,000 oo muhaajiriin ah sidii ay uga bixi lahaayeen dalka Libiya.
Midowga Yurub wuxuu kale oo hirgalin doonaa geedisocod lagu meelaynayo 50,000 oo qof oo u baahan magangalyo caalami ah.